กันดารวิถี 33 TNCV - 4 Mose 33 AKCB
1Eyi ne akwantu nhyehyɛe a Israelfo dii so bere a Mose ne Aaron de wɔn fi Misraim no. 2Mose kyerɛw faako a wɔfaa nyinaa sɛnea Awurade kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ no. Eyinom ne mmeae ahorow a wɔsoɛɛ wɔ wɔn akwantu no mu.
3Wosii mu fii Rameses kuropɔn no mu wɔ Twam Afahyɛ a edi kan no akyi ɔsram edi kan da ɛto so dunum. Wɔde akokoduru fii hɔ a Misraimfo no rehwɛ wɔn. 4Saa bere no na Misraimfo no resie wɔn mmakan a Awurade kunkum wɔn anadwo a ade rebɛkye ama wɔatu kwan no, efisɛ na Awurade de atemmu aba wɔn anyame no nyinaa so.
5Wofii Rameses no, wɔbɛbɔɔ atenae wɔ Sukot.
6Wofii Sukot bɛbɔɔ atenae wɔ Etam, sare no ano.
7Wofii Etam san wɔn akyi baa Pihahirot a ɛwɔ Baal-Sefon apuei fam, na wɔbɔɔ atenae bɛnee bepɔw Migdol.
8Wofi Pihahirot, na wotwaa Po Kɔkɔɔ no kɔɔ sare so. Wɔde nnansa nantew faa Etam sare so kɔbɔɔ atenae wɔ Mara.
9Wofii Mara no, wɔbaa Elim; baabi a na mmura dumien ne mmedua aduɔson wɔ hɔ.
10Wofii Elim no, wɔbɔɔ atenae wɔ Po Kɔkɔɔ no ho.
11Wofii Po Kɔkɔɔ no ho, kɔbɔɔ atenae wɔ Sin nweatam so.
12Wotu fii Sin sare so kɔbɔɔ atenae Dofka.
13Wofii Dofka kɔbɔɔ atenae wɔ Alus.
14Wofii Alus kɔbɔɔ atenae wɔ Refidim, baabi a na wonnya nsu mma nnipa no nnom.
15Wofii Refidim no, wɔkɔbɔɔ atenae wɔ Sinai sare so.
16Wofii Sinai sare so no, wɔkɔɔ atenae wɔ Kibrot-Hataawa.
17Wofii Kibrot-Hataawa no, wɔkɔbɔɔ atenae wɔ Haserot.
18Wofii Haserot kɔbɔɔ atenae wɔ Ritma.
19Wofii Ritma kɔbɔɔ atenae wɔ Rimon Peres.
20Wofii Rimon Peres kɔbɔɔ atenae wɔ Libna.
21Wofii Libna kɔbɔɔ atenae wɔ Risa.
22Wofii Risa kɔbɔɔ atenae wɔ Kahelata.
23Wofii Kahelata kɔbɔɔ atenae wɔ Sefer Bepɔw so.
24Wofii Sefer Bepɔw so kɔbɔɔ atenae wɔ Harada.
25Wofii Harada kɔbɔɔ atenae wɔ Makhelot.
26Wofii Makhelot kɔbɔɔ atenae wɔ Tahat.
27Wofii Tahat kɔbɔɔ atenae wɔ Tera.
28Wofii Tera kɔbɔɔ atenae wɔ Mitka.
29Wofii Mitka kɔbɔɔ atenae wɔ Hasmona.
30Wofii Hasmona kɔbɔɔ atenae wɔ Moserot.
31Wofii Moserot kɔbɔɔ atenae wɔ Beneyaakan.
32Wofii Beneyaakan kɔbɔɔ atenae wɔ Horhagidgad.
33Wofii Horhagidgad kɔbɔɔ atenae wɔ Yotbata.
34Wofii Yotbata kɔbɔɔ atenae wɔ Abrona.
35Wofii Abrona kɔbɔɔ atenae wɔ Esion-Geber.
36Wofii Esion-Geber kɔbɔɔ atenae wɔ Kades, wɔ Sin sare so.
37Wofii Kades kɔbɔɔ atenae wɔ Bepɔw Hor so, wɔ Edom hye ano. 38Bere a woduu Bepɔw Hor ase no, Awurade ka kyerɛɛ ɔsɔfo Aaron se ɔnkɔ bepɔw no atifi, na ɛhɔ na okowui. Asɛm yi sii mfe aduanan so a Israelfo tu fii Misraim no. 39Aaron dii mfe ɔha aduonu abiɛsa, bere a owuu wɔ Bepɔw Hor so no.
40Saa bere no ara mu na Kanaanhene Arad a ɔtenaa Negeb wɔ Kanaan asase so no tee sɛ Israelfo no reba nʼasase so.
41Israelfo no toaa wɔn akwantu no so fi Bepɔw Hor so kɔbɔɔ atenae wɔ Salmona.
42Wofii Salmona kɔtenaa Punon.
43Wofii Punon kɔtenaa Obot.
44Wɔtoaa so kɔɔ Iye-Abarim, Moab hye so kɔtenaa hɔ.
45Wofii hɔ no, wɔkɔtenaa Dibon Gad.
46Wofii Dibon Gad kɔtenaa Almon Diblataim.
47Wofii Almon Diblataim kɔtenaa Abarim mmepɔw a ɛbɛn Nebo no so.
48Akyiri no, wotutu fii hɔ twaa mu wɔ Yeriko kɔbɔɔ atenae wɔ Moab tataw so wɔ Asubɔnten Yordan ho. 49Wɔwɔ saa beae hɔ no, wɔtenaa mmeae bebree a ɛbɛn Asubɔnten Yordan ho—efi Bet-Yesimot kosi Abel Sitim a ɛwɔ Moab tataw so no.
50Bere a wɔabɔ atenase wɔ hɔ no na Awurade nam Mose so kasa kyerɛɛ Israelfo no se, 51“Sɛ mutwa Asubɔnten Yordan kodu Kanaan asase so a, 52mompam nnipa a wɔte hɔ no nyinaa na monsɛe wɔn abosom ne ahoni a wɔde abo ayɛ ne nsɔree a wɔasisi no petee mu wɔ mmepɔw so ne mmeae a wɔsom wɔn ahoni no nyinaa. 53Mede asase no ama mo. Momfa na montena so. 54Munnyina ntontobɔ so nkyekyɛ asase no, sɛnea mo mmusua no te. Wɔn a wɔdɔɔso no, wɔbɛma wɔn asase kɛse na wɔn a wosua no nso benya asase ketewa. Sɛnea ntonto no besi abɔ biara no na ɛbɛyɛ wɔn de. Monhwɛ mo agyanom mmusua so mfa nkyekyɛ.
55“Sɛ moampam nnipa a wɔte hɔ no a, wɔbɛyɛ mo ani ase mpe ne mo honam mu nsɔe. Wɔbɛhaw mo wɔ asase a mobɛtena so no so. 56Na mede nea masusuw sɛ mɛyɛ wɔn no, bɛyɛ mo.”
AKCB : 4 Mose 33